Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 iya kunceda ukuphucula ukuzimela kwayo | I-Androidsis
Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 iya kunceda ukuphucula ukuzimela kwayo
Kuyo yonke i2018 kubekho ukuvuza okuninzi kulindelo olulandelayo olulandelayo losapho lwaseKorea lweGlass S. Ngokucacileyo, sithetha malunga Samsung Galaxy S10. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, uphawu lwaseKorea luya kusothusa kwakhona ngeendaba zokuba le smartphone intsha iya kuba nayo. Kuyinyani ukuba inkampani esekwe eSeoul ihlala ibheja yonke into kwesi sigxina, ukuze ibe nayoyona teknoloji ifanelekileyo.
Ngoku, sifumanise nje ukuba umva walesi sixhobo uza kuba nekhamera ethe tyaba kathathu, kwaye ngokwamarhe athile, indlela efanayo iya kulandelwa njengakuqala I-Samsung Galaxy Note 9, Ukunyusa ibhetri ye-4000 mAh. Kule meko, Isamsung iya kubheja kwisayizi ezintathu zescreen, nee-intshi ezi-5.8, ii-intshi eziyi-6.1 kunye no-6.4 okwahlukileyo ngokwahlukeneyo.
Iinkcukacha ezithe kratya ngeSamsung Samsung S10
Ngalesi sikhundla sekhamera ye-Samsung Galaxy S10, okuphunyeziweyo kukunciphisa indawo, ukuvumela ukudibanisa ibhetri enamandla amakhulu okuphucula ukuzimela kwesixhobo. Emva koko, i-Samsung iya kubandakanya Umfundi weminwe kwiscreenNangona ayisiyonto intsha, iyimfuneko kakhulu kwizixhobo eziphezulu.
Umhla ekulindeleke ukuba uphehlelelwe i-Samsung Galaxy S10 izakuba ngunyaka olandelayo, ngokuqinisekileyo ngaphakathi kwesakhelo se-MWC 2019, ke kulindeleke ukuba iphume ngokudityaniswa kwe-5G, eya kuthi inike i-smartphone ukwanda kwesantya sokukhuphela kwaye ilayishe okuninzi. ngokukhawuleza, kubalulekile kwezo zixhobo ezifuna unxibelelwano olukhawulezileyo ukonwabela imidlalo kunye nokusetyenziswa njengeNetflix ngaphandle kwengxaki.
Kwakhona, phakathi kwamanye amarhe, ifowuni entsha ye-Samsung kulindeleke ukuba ingabi notshi kwiscreen. Okwangoku sinokulinda kuphela ukuba sazi ukuba la marhe avela veki nganye ayinyani kwaye ayatsha Samsung Galaxy S10 ukuhlangabezana nokulindelwe okuphezulu kwenkampani yaseKorea. Ngokubhekisele kumaxabiso, umbono kukuba uguqulelo olutshiphu luyaphuma, olungenakuba neenkcukacha ezininzi njengemodeli esemgangathweni, enjengale nguqulelo iya kuswela iscreen esigobile, inkcukacha ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 iya kunceda ukuphucula ukuzimela kwayo
Ngaba iBlack Shark Helo iya kukhutshwa eYurophu?